Akụkọ - Ọ na-akụ ihe niile, gbadaa
Ọtụtụ ihe ọkụkụ n'izu a, ọtụtụ n'ime ha nwere ike ịbụ ihe ọhụrụ nye gị, yabụ obere nkọwa nwere ike bụrụ ezigbo echiche:
Udara apụl na-acha uhie uhie nwere anụ ụtọ dị ụtọ nke ukwuu, ụtọ ahụ na-echetara m mkpụrụ apụl kachasị mma nke ị riri na naanị ihe ngosi maple syrup.
Apụl Fuji, nke a na-akpọkwa apụl na-acha uhie uhie, bụ apụl gbaa gburugburu, ọlaedo uhie. Ha dị ka ụtọ karịa apụl nwanyị na-acha uhie uhie, nwere obere mgbidi dị gịrịgịrị. Anyị hụrụ ihe ndị a n'anya maka jam na ebe a na-eme bred.
Anyị toro Galal apụl na-anọgidesi ike na-arịọ nke ndị na-ebubata ngwaahịa na mba ofesi mgbe niile. Ndị a bụ obere apụl dị iche iche nke dị ka ọkụ na-enwu gbaa, enweghị mgbakwunye ọzọ, mana ọtụtụ ekpomeekpo. A na-ejikarị ha eme nri salad salad, ihe oriri na-esi ísì ụtọ nke osisi sida, ose, yabasị, na galik, nke a na-eji esi nri osikapa na agwa, anụ, ma ọ bụ ihe oriri.
Mgbe anyi gachara iberibe yabasị anyị niile echekwara, anyị nwekwara obere obere obere eyịm dị ụtọ, nke hà ka yabasị pearl. Ndị a ga - abụrịrị eriri ejiri zuru ike maka skewers maka kabobs a gụchara anụcha, tinye ya na stew, ma ọ bụ belata dị ka ndị otu yabasị ibe anyị.
Nke ahụ bụ ihe gbadara n'ubi 'dị egwu' maka ugbu a. Anyị ka nwere ọtụtụ galik, ginger, apụl ọhụrụ, na eyịm ma ọ bụrụ na nke a bụ mmasị gị, nweere onwe gị ịlele foto eserese anyị na weebụsaịtị anyị, ma soro njikọ dị n'okpuru www.primeagr.com. [foto eserese tinye ebe a]
Otu edemede ikpeazụ, anyị kwesịrị ịtụtụrụ ma bido n'oge dị ka o kwere mee iji jide n'aka na nri gị na-apụ n'ọhịa ọhụrụ iji nwee ezigbo mma. Maka ndị gị na-ahọrọ itinye iwu, ị nwere ike inyere anyị aka site na ịnweta iwu gị ntakịrị oge karịa ka ọ dị na mbụ, yabụ anyị maara ihe anyị kwesịrị ịnwe maka gị. Anyị na-ahụ ụmụ nnụnụ n'anya!
Daalụ dị ka azụmahịa gị oge niile, ma nwee izu!